Igbo, John: Lesson 117 - Jizọs gosiputara Meri Magdalini (Jọn 20:11-18) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 117 (Jesus appears to Mary Magdalene)
c) Jizọs gosiputara Meri Magdalini (Jọn 20:11-18)
11 Ma Meri guzo n'èzí n'ílì, nākwa ákwá. Ya mere, mb͕e ọ nākwa ákwá, o ruru ala, legide anya n'ílì ahu; 12 o we hu ndi-mọ-ozi abua nēyi ọcha ka ha nānọdu ala, otù onye n'isi-ya, otù nime ọbu-ukwu, ebe aru Jizos di. 13. Ha we si ya, Nwanyi, gini mere i nākwa ákwá? O we si ha, N'ihi na ha ewerewo Onye-nwem, ma amaghm ebe ha tọb͕ọrọ Ya.
Ndị na-eso ụzọ abụọ ahụ laghachiri mgbe ha ghọtara na ili ahụ tọgbọ chakoo. Enweghị uru iji nọrọ.
Otú ọ dị, Meri Magdalin lọghachiri n'ili ahụ mgbe ọ gwachara ndị na-eso ụzọ ya na ọ tọgbọ chakoo. Ọ nọgidere, ọ bụ ezie na ha abụọ ahụla n'ụlọ n'ihi na ọ naghị enwe afọ ojuju na eziokwu ahụ bụ na ozu ahụ apụla. O jidere ya n'ihi na ọ bụ olileanya nke ume ya. N'ịbụ ndị na-ahụghị ahụ, olileanya ya gbara ọsọ. Ya mere, o kwara ákwá nke ukwuu.
N'obodo nke iru újú ya, Jizọs zipụrụ ndị mmụọ ozi abụọ ya bụ ndị gosipụtara ndị inyom ndị ọzọ. N'ebe a, ọ nọ na-ahụ ka ha na-anọdụ ala n'akụkụ olulu efu na uwe ọcha na-enwu gbaa ọchịchịrị. Ma ha enweghị ike ịkasi ya obi n'ihi na naanị ịhụ Jizọs ga-eme nke ahụ. Obi ya wee kwuo, "Olee ebe ị nọ, Onyenwe m?"
A na-agwa anyị okwu oku a. Kedu ihe anyị chọrọ? Gịnị mere anyị ji achọ ihe anyị chọrọ? Kedu ihe mgbaru ọsọ anyị? Ànyị na Magdalene ma rịọ maka ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịhụ Jizọs? Obi gị ọ na-eti mkpu ka ọ bịa ọzọ?
14 Mb͕e o kwusiri nka, o chigharia, hu Jisus ka o guzoro, ma ọ maghi na ọ bu Jisus. 15 Jizos si ya, Nwanyi, gini mere i nākwa ákwá? Ònye ka i nāchọ? O we si ya, Onye-nwe-ayi, ọ buru na i buru ya, gwam ebe i tọb͕ọrọ ya, m'gēwepu kwa ya. 16 Jizos we si ya, Meri. O we chigharia, si Ya, Rabon; nke bu, Onye-ozizí.
Jizọs zara mkpu ákwá ya. Mgbe ndị ọzọ nwere afọ ojuju ịhụ ili ahụ na-adịghị efu ma nụ ndị mmụọ ozi, Meri Magdalin chọsiri ike ịhụ ọhụụ; Ọ bụ naanị ya. Jizọs pụtara n'ihu ya, bụ onye nkịtị na-enweghị ọkụ.
Ọ nọ na-echegbu onwe ya nke ukwuu, ọ bụghị ịghọta olu Jizọs ma ọ bụ ịnụ ndị mmụọ ozi. Ọ chọrọ ịhụ Jizọs, ọ bụghị nanị ịnụ okwu ya. Ma o ghughota onu ya n'oge ahu, n'ihi na obi nke na-eru uju na enweghi uzo nke Kraist na ayi, ma o geghi nti okwu ya di nwayo. Otutu ndi choro Chineke Onye Okike achọtaghi ya, n'ihi na ha huru onye choro ma obu choo karia onye nlekota onye obula.
Ma Jizọs maara ịhụnanya Meri ma mebie ihe nhụjuanya ya na okwu ọmịiko ya; ọ kpọrọ ya aha, na-ekpughe na ya karịrị mmadụ, ọ bụghị onye na-elekọta ubi. Ọ bụ onye maara ihe nile, Onye maara ihe, Onyenwe anyị n'onwe ya. Ọ kpọrọ Meri dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọma si akpọ atụrụ ya nke ọ maara n'aha, inye nd ebighiebi. Onye hụrụ Jizos n'anya hr n'anya ya wee nata mgbaghara nke mmehie dika Onyenwe anyi náakpo aha ya, na nkasi obi nke mmo nso.
Ugbu a Jizọs kpọrọ gị aha. Ị na-anụ olu ya, na-ahapụ obi abụọ na mmehie gị nile ịbịakwute ya?
Meri zara okwu, "Nna-ukwu!". Okwu Meri ji (Rabboni) bu onye mara ihe nile ma bu onye puru ime ihe nile. O nwere ihe ùgwù nke ịbụ onye na-amụ ihe n'ụlọ akwụkwọ ya, ọ na-enyekwa ya ikike, ike, nchebe na ndụ ebighị ebi. Ya mere, azịza ya yiri ka owuwe nke Chọọchị na-echere, mgbe ọ ga-atụ anya ogologo oge ga-ahụ Onyenwe ya na-abịa n'ígwé ojii, fee ya ofufe na nrube isi na ito ya na Hallelujah.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ehulata n'ihu gị maka ịzaghachi agụụ Meri site n'igosi ya. Ị kasiri ya obi site na ọnụnọ gị. Okwu gị bụ ndụ. Meghee anya na obi anyi iji nweta okwu gi. Nye anyị nrubeisi iji tụkwasị gị obi na ọṅụ.
Gịnị mere Mary akwụsịghị ịchọ ozu nke Onyenwe anyị Jizọs ruo mgbe ọ gụrụ onwe ya nye ya, na-akpọ ya n'aha?